I-Semalt ichaza indlela yokukhipha idatha nge-Screen Scraping Tool
I-Web scraping igama elidumile emhlabeni jikelele. Ivumela ukuthi siqoqe idatha ewusizo kusuka emithonjeni ehlukene futhi kusize sikhule amabhizinisi ethu. Sekuyiminyaka, ama-web scrapers asetshenziselwe ukukhipha ulwazi kusuka kumakhasi ahlukahlukene ewebhu, izinkomba zenkampani, izinkundla ze-intanethi, izingosi zokuhamba, izindawo zokuthengisa, namawebhusayithi okuthenga - afiche curso de fotografia digital canon. Ukukhipha isikrini kuyithuluzi elisha, futhi awudingi amakhono okuhlela ukuze uzuze kuwo. Leli thuluzi lihle kumabhizinisi omabili nakuma-freelancers njengoba kungenza umsebenzi wakho ube lula futhi ngokushesha. Izici eziyinhloko zeThuluzi lokuKhipha isikrini zibalulwe ngezansi.
1. Uqhathanisa amanani kalula
ngeThuluzi lokuKhipha isikrini, ungakwazi ukuqhathanisa kalula amanani amawebhusayithi ahlukene okuthenga njengama-Amazon ne-eBay. Iphinde iqoqe, ihlele futhi ilondoloze ikhwalithi yedatha yakho ngenkathi ikhishwa. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lihlela futhi lilungisa zonke izinkinga ezincane futhi likusiza ukuba ufinyelele ulwazi lwamanani wemikhiqizo ehlukene.
2. Izingosi zokuxhumana zomphakathi
Abahleli nabathuthukisi bavame ukukhononda ngokuthi amathuluzi okuhlunga ajwayelekile angakwazi ukukhipha ulwazi kumasayithi okuxhumana nabantu. Ngokungafani nalezi zicelo zokukhipha, i-Screen Scraping ithuluzi ludatha idatha ewusizo kusuka ku-Facebook naku-Twitter bese uyihlela ngendlela ehlelekile.
3. Yenza ucwaningo lwe-intanethi lula
Leli thuluzi lihle kubacwaningi, othisha nabafundi ngoba lishaya idatha kusuka kumaphephandaba e-intanethi naku-eBooks kalula. Ungakwazi ukukhipha okuqukethwe kwewebhusayithi ehlukene yezemfundo bese uyithumela njengeyakho. Kodwa kuzodingeka unakekele imithetho ye-copyright ne-trademark ngenkathi ususa idatha kusuka kumthombo we-intanethi. Ngokuvamile, leli thuluzi lisiza abafundi ukuthola nokuhlela ulwazi kusuka kumasayithi ahlukene. Kubasiza ukuba balungise izabelo ezinembile futhi bahlasele amakhasi ewebhu ayizinkulungwane eziyishumi ngehora.
4. I-web crawler enamandla:
Ukukhipha isikrini kuyithuluzi eliphambili uma kuziwa ekukhombiseni amakhasi ewebhu ahlukene. Ivumela ukuthi siqalise abakwa-crawlers abaningi ngesikhathi, futhi akudingeki siqaphe okwenzeka ngemuva. Singaqokomisa idatha futhi leli thuluzi lizogcina imininingwane ekhishwe ku-database yayo. Ngaphezu kwalokho, ungayisebenzisa ukukhanda amakhasi ewebhu ahlukene ahlukene futhi ngaleyo ndlela uthuthukise ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Ithuluzi lokukhipha isikrini lihle kubaphathi bewebhu futhi liyabasiza ukuba bathuthukise isayithi lokusesha kwamasayithi abo namabhulogi.
Idatha ye-Scrape nge-Screen Scraping Tool:
Ukuze uthole kalula, nansi incazelo yesinyathelo ngezinyathelo zokuqala ukusula iwebhu ngaleli thuluzi elimangalisayo:
Isinyathelo 1: Chofoza ku-Ithuluzi lokuKhipha isikrini kuTebhu yakho yokuKwakha. Leli thuluzi lizobona into ngayinye ngayinye ngamanani ayo ahlukile.
Isinyathelo 2: Kubalulekile ukukhetha indlela yokukhipha kanye nefomethi yedatha yakho. Ngokuvamile, ithuluzi le-Screen Scraping linikeza idatha kumafomethi we-CSV ne-JSON.
Isinyathelo 3: Chofoza inkinobho Qhubeka ukuze uqale ukukhipha. Leli thuluzi liyokuqoqa okokuqala ulwazi, lihlele futhi lifake kufomethi efiselekayo. Ungakhohlwa ukulanda idatha ekhishwe ku-hard drive yakho ukuze usebenzise okungaxhunyiwe ku-intanethi.